सक्रिय र गतिशील एनआरएनए चाहन्छु :डिला खरेल,कोषाध्यक्षका प्रत्यासी - Himalayan Kangaroo
सक्रिय र गतिशील एनआरएनए चाहन्छु :डिला खरेल,कोषाध्यक्षका प्रत्यासी
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ असार २०७२, आईतवार ०२:३७ |
-डिला खरेल,कोषाध्यक्षका प्रत्यासी
आगमी जुलाई ४ मा हुने एनआरएनए चुनावको माहोल उचाइमा पुगिसकेको छ । त्यसैले विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिएक उम्मेदवारहरु आ आफ्नो एजेण्डा र घोषणापत्र सहित मतदाताका बीचमा आफ्ना कुराहरु पुर्याउँन व्यस्त छन् । यस्तै अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदाय र मतदाताहरु पनि आफ्नो उम्मेदवारबारे जान्न र बुझ्न इच्छुक रहेका छन् । त्यसैले हिमालयन कङ्गारुले अब चरणबद्द रुपमा विभिन्न उम्मेदवारहरुबारेको जानकारी र उनीहरुका धारणा क्रमशः समेट्दै जानेछौं । त्यसैक्रममा यसपटक एनआरएनएको कोषाध्यक्ष पदका बलिया उम्मेदवारका रुपमा देखिनुभएको डिला खरेलका महत्वपूर्ण विचारहरु समेटेका छौं ।
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईको उम्मेदवारी केका लागि ?
गैर आवासीय नेपाली संघमा सन् २००६ देखिको अनवरत संलग्नतालाई संस्थाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा वसेर आफूले सिकेका,जानेका केहि अभ्यासहरुलाई संस्थागत गर्न र प्रवासमा रहेको नेपाली समुदायसंग मिलेर अझ वढी समुदायको हितमा काम गर्नको निम्ति मैले मेरो उम्मेदवारी अगाडी सरेको हुँ । मलाई विश्वास छ, आगामी जुलाई ४ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनवाट सक्षम,सवल र इमान्दार नेतृत्व चयन हुनेछ । मेरो उमेद्वारी संस्थाको आर्थिक पाटोको मितव्ययिता, पारदर्शीता र जिम्मेवारपूर्ण विवरण सरोकारवाला सवै माझ पुर्याउन र भविष्यमा संस्थालाई कसरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न र दिगो वनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा योजना सहित काम गर्नका लागि पनि हो !
यसपटक तपाईको मूख्य मूख्य एजेण्डा के के छन् ?
मेरो उम्मेदवारीको मूख्य एजेण्डाहरु निम्न अनुसार छन् :
–संस्थालाइ आर्थिक रुपमा सम्पन्न र दिगो वनाउने योजना तर्जुमा गर्ने र सोहि अनुरुप काम गर्ने गराउने !
–नेपालमा वार्षिक रुपमा कम्तिमा १ क्षेत्रमा कम्तिमा १ करोड लगानीको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने !
–राष्ट्रियस्तरको Entrepreneur & Enterprise Development Conference आयोजना गर्ने !
– समाज उत्थान कोषलाई ५ लाख पुर्याउने र विभिन्न सामाजिक विपत्तिमा सहयोग गर्ने !
–छुट्टै विद्यार्थी कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने र विद्यार्थीहरुको अप्ठ्यारोमा सहयोगी भई काम गर्ने !
–अस्ट्रेलियामा रहनु भएका सवै नेपाली विद्यार्थी, युवा साथीहरु जो भविष्यमा लेखा तथा वितिय सेवामा या त रोजगारमा जान चाहनु
हुन्छ या त आफ्नै व्यवसाय शुरु गर्न चाहनुहुन्छ हरेक ६ महिनामा सहयोगी सिद्ध अन्तरक्रिया, सेमिनार तथा तालिमको आयोजना गर्ने !
–छुट्टै परोपकारी अक्षय कोषको निर्माण गर्ने र मात्रै नेपाल मा विविध परोपकारी अभियानमा सहयोगी वन्ने !
–संस्थाले यस अघि अगाडि सरेका विभिन्न खाले कोषहरुको अध्ययन गरि उक्त कोषहरुलाई अझ प्रभावकारी वनाउने !
–संस्थाको आर्थिक विवरण हरेक ३, ३ महिना मा सार्वजनिक गरेर सरोकारवाला सवैमा प्रष्ट राख्ने !
विगतमा पनि कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो,अबको नेतृत्वबाट एनआरएनए र यहाँका नेपाली समुदायले के अपेक्षा राखेक छन् ?
विगतमा निर्वा्चित सदस्य थिएँ तर विगतको समितिको कुनै एउटा पनि वैठकमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएन । तथापी आफ्नो ठाउँवाट सक्दो सहयोगी भएर काम गरि रहें ! विगतको त्यही कमजोरीलाई सुधारेर अबदेखि एनआरएनए साँच्चिकै सक्रिय र गतिशीलहोस भन्ने यहाँका नेपाली समुदायको अपेक्षा रहेका छन् ।
ती अपेक्षाहरु पूरा गर्न तपाईसँग कस्तो कार्ययोजनाहरु छन् त ?
मेरा माथिका एजेन्डा प्राप्ति गर्नका लागि विस्तृत कार्य योजना वनाई सरोकारवाला सवैको सहयोगमा चरणवद्ध काम गर्दै जानेछु !
यतिखेर नेपाल दैवी विपत्तिपछि पुननिर्माणको क्रममा छ । यस्तो बेला सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायबाट सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा सहित अपिल पनि गरिसकेको छ । सहकार्यका लागि तपाईको कुनै छुट्टै योजनाहरु छन् ?
पक्कै पनि नेपालको विपत्तिमा हामी सवै आ आफ्नो ठाउवाट जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ लाग्नु नै पर्छ । एनआरएन आइसीसीको गाइड लाइनमा वसेर यहाँवाट पूर्ण रुपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न लागिपर्नेछु । नेपालको पुननिर्माण मबाट र संस्थाबाट हुने हरेक कुरामा सहयोगी वन्न तयार छु !
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायका मूख्य समस्याहरु के के छन् । त्यसको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?
अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदाय एक प्रेरणादायी र नमुना समुदाय भएको यहाँको सरकार र अन्य समुदायको विश्लेषण रहेको छ,जुन एकदमै गौरवपूर्ण कुरा हो । नेपाली समुदायका सामाजिक समस्या के के हुन् ? भन्नेबारे अझ विस्तृत अध्यन गर्न सहयोगी वन्नेछु म र खास खास समस्या पहिचान गरेर समाधान लागि संस्थागत रुपमा विशेष पहल गर्नेछु । उदाहरणको लागि नेपाली भाषालाई मान्यता प्राप्त भाषाको रुपमा स्थापित गराउनको लागि पहल गर्ने , वसाई सराइका विविध समस्याहरु केलाउन विज्ञहरुको टोलि वनाएर अध्ययनको थालनी गर्ने , नेपाल सरकारको वलियो उपस्थितिको लागि अझै प्रयत्न गर्ने लगायतका कममा सक्रिय सहभागी हुनेछु !
तपाईका प्रतिस्पर्धीहरु पनि आ आफ्नो ठाउँमा बलियो प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहनुभएको छ । तपाईलाई भोट दिनुपर्ने आधारहरु के के छन् भन्नुहुन्छ ?
मलाइ भोट दिनु पर्ने आधारहरु मेरा कार्यक्रम र नीतिहरु नै हुन्,जुन मैले माथि राखिसकें ! प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व चयन हुँदै छ,पक्कै पनि सवै विवेकशील मतदाताले आफ्नो निर्णय वुद्दिमतापूर्ण तरिकाले गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु !
Previousएनआरएनएको अध्यक्षका उम्मेदवारहरु कस्ता छन् ?
Nextजापानमा शौचालय प्रतियोगीता हुँदै
युरोकपमा ‘केक टु नेपाल’को सेलेब्रेशन अफर
३२ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०३:२२
जुलाई १ देखि अष्ट्रेलियामा तलव बढ्ने,न्युनतम तलब प्रतिघण्टा १७.७० पुग्ने
२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार १२:३०